St. Maarten anovhura zvakare kuUS muna Nyamavhuvhu 1 ine yakasimba protocol
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vadivelu Comedy Dailymotion vi News » St. Maarten anovhura zvakare kuUS muna Nyamavhuvhu 1 ine yakasimba protocol
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Vadivelu Comedy Dailymotion vi News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
St. Maarten anovhurazve kuUS muna Nyamavhuvhu 1 ine protocol yakasimba
St. Maarten ichavhura muna Nyamavhuvhu 1, 2020, kune vafambi vanobva kuUS. Kuchengetedzwa kwevashanyi nevagari kunoramba kuri kwekutanga kukoshesa nyika. Mukugadzirira kuvhurwa, kuongororwa kwenzvimbo kwakaitika padzimba dzese dzekugara kuti uve nechokwadi chekuti protocol uye nongedzo zviripo zvinoteverwa. Nemaitiro akaomarara aya, St. Maarten inoenderera mberi nekuvhura kwayo zvishoma nezvishoma.
Mukati mechikamu chekugamuchira vaeni, matanho matanhatu epakati akagadzirwa kudzivirira kupararira kwe Covid-19 pachitsuwa ichi kusanganisira kudhirowa kwemuviri pamwe nemamaki epasi, anosungirwa kumeso mashandisirwo, kuremara munharaunda kwemamita maviri, maitiro ekuzvichenesa, nzira yakakodzera yekuchenesa nzvimbo, pekugara-pamba kana mutemo wekurwara, nemamenyu edhijitari mameseji.
Mirau yakaoma iriko yekufamba kuenda kuchitsuwa sezvakataurwa neBazi reHutano hwePaguru, Social Development uye Vashandi. Vashanyi vanofanirwa kupedzisa kuzivisa kwehutano pamhepo maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasvika kuburikidza www.anokaramsey.edu. Vashanyi vanofanirwa kufamba nekopi yehutano hwavo kuzivisa. Vatakuri vese vanofanirwa kupedzisa bvunzo ye COVID-19 (PCR). Mufambi anofanirwa kugamuchira bvunzo uye mhedzisiro mukati maawa makumi maviri nemaviri zuva rekufamba risati rasvika. Hapana mumwe bvunzo uchagamuchirwa nezviremera zveSt. Maarten. Vashanyi vanokundikana kupa COVID-72 bvunzo vanozoedzwa voparadzaniswa kwemazuva gumi nemana nemari yavo.
Vese vashanyi vanofanirwa kufamba nemasikisi avo, ma sanitizers nemaoko uye vanopfeka mask yavo panguva yavari kutiza uye panhandare. Vashanyi vanorayirwa zvakasimba kuti vatenge zvese-zvine njodzi kufamba inishuwarenzi, kuve nechokwadi chekuti vanovharirwa mune izvo zviitiko pavanorwara vachiri pazororo. Kubva munaAugust 1, Princess Juliana International Airport ichave iri kutarisira ndege dzinotevera: American Airlines ichatangazve kuenda nendege zuva nezuva kubva kuMiami uye kashanu pasvondo kubva kuCharlotte kunze kweChipiri neChitatu. Mushure maAugust 20, vachabhururuka kamwe pasvondo kubva kuCharlotte. Delta Airlines inoshanda katatu pavhiki kubva kuAtlanta neChina, Mugovera neSvondo. Jet Blue ichabhururuka kamwe pasvondo kubva kuJFK Airport, uye Spirit Airlines ichabhururuka kamwe pasvondo kubva kuFort Lauderdale.
Kubva munaJune 15, ndege dzenyika dzepasi rose dzakatangazve kuenda kuSt. Maarten mushure memwedzi mitatu yekuvharwa kwekufamba kwekutengesa. Yakavanzika majeti, maCaribbean neEuropean vatakuri vakaita seAir France neKLM vanga vachimhara panhandare zvakare. Iyi nhanho yekuvhura nzira yakavhurika kusvika ikozvino.